ဂျိုးအန်ဒါဆင်သည် Cookure S7 / i Prime မှန်ဘီလူးများဖြင့် Resurrect Top Boy ကိုကူညီသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဂျိုး Anderson တို့ကိုကှတျချ S7 / i ချုပ်မှန်ဘီလူးနှင့်အတူထမြောက်ခြင်းထိပ်တန်း Boy ကူညီပေး
ဂျိုး Anderson တို့ကိုကှတျချ S7 / i ချုပ်မှန်ဘီလူးနှင့်အတူထမြောက်ခြင်းထိပ်တန်း Boy ကူညီပေး
ဘယ်အချိန်မှာ၏မူလနှစ်ခု Mini-စီးရီး ထိပ်တန်း Boy4အတွက်ဗြိတိန်ရဲ့ Channel ကို 2013 အပေါ်အဆုံးသတ်, လူအနည်းငယ်နှစ်ခုလန်ဒန်လမ်းမပေါ်ဂိုဏ်း ပတ်သက်. ပြင်းထန်စွာ-ချီးကျူးဒရာမာအစဉ်အဆက်ကိုပြန်လာလိမ့်မည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။
ကနေဒါရက်ပ် YouTube ပေါ်မှာစီးရီးရှာဖွေတွေ့ရှိသူ 2017 အတွက်အခွင့်အရေးများကိုဝယ်ယူနိုင်အောင် enamored သူ Drake (Aubrey "Drake" ဂရေဟမ်), ရိုက်ထည့်ပါ။ အခုတော့ Netflix နဲ့ 10 ဖြစ်စဉ်များကို အသုံးပြု. ပစ်ခတ်နှင့်အတူယခုနှစ်တတိယရာသီ premiere ပါလိမ့်မယ် ကှတျချ S7 / i ချုပ်မျက်ကပ်မှန်။
အဆိုပါစီးရီးဖန်တီးသူနှင့်စာရေးဆရာ Ronan Bennett ကပြပွဲရေးသားဖို့ပြန်ပြီးလျှင်, တွင်လည်းသူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုပြပွဲ၏လူ့ဒြပ်စင်အဘို့အယင်း၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမောင်း Drake, အတူတစ်အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ခြောက်နှစ်လွန်ပြီ, မူရင်းဇာတ်ကောင်ပြန်လည်ပူးပေါင်းနှင့်သူတို့၏ '' ထိပ်တန်း Boy '' status ကိုပြန်လည်တောင်းဆိုဖို့ကြိုးစားအဖြစ်တတိယစီးရီးကိုယူလိုက်တယ်။
ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ဂျိုး Anderson ကချက်ချင်းစီးရီးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။ "ဒါဟာဇာတ်လမ်းတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားမည်သို့မည်ပုံနီးပါး Shakespearean ရဲ့တခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါ" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "မူလကတစ်ဦးချင်းစီရာသီ၏လေးဖြစ်စဉ်များအသီးအသီးရာသီတစ်ခုတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးများကညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ဒီ 10-ဇာတ်လမ်းတွဲစီးရီးများအတွက်ပြပွဲလေးဒါရိုက်တာများနှင့်အတူလေးလုပ်ကွက်သို့ကျိုးပဲ့ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အလုပ်၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွင့် - - ငါကမ္ဘာဖန်တီးနိုင်ဖြစ်ခြင်းကိုချစ်။ နှင့်ဤငါရှေ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အမျိုးအစားခဲ့, ဒါကြောင့်ငါအခွင့်အလမ်းမှာခုန်တက် "ထုတ်လုပ်မှုဇူလိုင်လ 2018 အတွက်စတင်လန်ဒန်ခြောက်လသို့ပွေးလေ၏။
ဒါပေမယ့်စိန်ခေါ်မှုဇာတ်လမ်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်, တစ်ဦး 2019 Netflix နဲ့ပရိသတ်ကိုတစ်ပြပွဲ update လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သည်။ 16 မာစတာ: Anderson တို့ရဲ့ရှုထောင့်ကနေသူသည်မူလကတစ်ဦး9ဖန်တီးရန်2× 35 အာရုံခံအပေါ် anamorphic မှန်ဘီလူးကို အသုံးပြု. Alexa အပေါ်ပစ်ခတ်တဲ့ပြပွဲနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ရတယ်။ တစ်ဦး Netflix နဲ့ပြပွဲများအတွက်လိုအပ်ချက်ကြောင့် 4K အတွက်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
"ARRI 4K ၎င်း၏အသစ်ကကြီးမားတဲ့ပုံစံ Alexa LF ပိုကြီးတဲ့အာရုံခံကိရိယာပဲကြေညာခဲ့သော" Anderson ကရှင်းပြသည်။ "ဒါပေမယ့်ငါ Super35 အသုံးပြုချက်ပြုတ်မျက်ကပ်မှန်အလုပ်မလုပ်ဖို့မသွားခဲ့ကြသည် - သူတို့အာရုံခံကိရိယာဖြည့်ပါလို့မရပါဘူး။ ထိုအခါငါကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်ကို aperture ကြိုက်တယ်။ "
အရာနှစ်ခုချက်ပြုတ် S7 / i မျက်ကပ်မှန်အဘို့အ Anderson တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုလုပ် ထိပ်တန်း Boy.
"ပထမ, မျက်ကပ်မှန် T2 မှာဒါအစာရှောင်ကြသည်။ ဒုတိယအချက်မှာငါချက်ပြုတ် S4s အပေါ်အသုံးပြုခြင်းမှအကျွမ်းတဝင်ခဲ့ကြည့်ခဲ့ အဆိုပါဟောငျးက Man & Tသူဂွန်။ '' ကှတျချLook® '' ဒါကမှန်ဘီလူးမိသားစုများအကြားသယ်ဆောင်။ ငါဒါကောင်းစွာကြောင့်ကြည့်သိတယ်, ဒါကြောင့်ဒီဇာတ်လမ်းများအတွက်သင့်လျော်သောခဲ့ပါတယ်။ "
ဖီးလ် Whittaker ဓာတ်ပုံယဉျကြေး
တကယ်တော့ကတည်းက ထိပ်တန်း Boy မျိုးစုံယူနစ်နှင့်အတူရိုက်ကူးမည်ဖြစ်ကြောင်းသူကကှတျချ S7 / i မှန်ဘီလူးတစ်ခုအပိုဆောင်းထားဝယ်ယူရန်ကင်မရာနှင့်မှန်ဘီလူးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း ARRI ငှားရမ်းခြင်းဗြိတိန်ယုံကြည်စိတ်ချသွားတယ်။ အဆိုပါ set ကို 25, 32, 40, 75, 100 နှင့် 135mm focal length ပါရှိသည်။
ဗြိတိန် / ဥရောပစတိုင်သေနတ်ပစ်, Anderson ကဇာတ်လမ်းပြောပြရန်ရှေးခယျြမှု၏မှန်ဘီလူးဖြစ်ဖို့ 75mm ရှာဖွေတာ, ကင်မရာကိုယ်တော်တိုင် operated ။ "ဒါကအသစ်တခုပုံစံကို အသုံးပြု. စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးခဲ့တယ်" ဟုအန်ဒါဆင်ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာနှိုင်းယှဉ် 16mm ရိုက်ကူးအဖြစ်နီးပါးတူညီခြားနားချက်င် 35mm။ အဆိုပါ S7 / i 75mm ငါ၏အလိုမျိုးတော့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒါကိုအမြင်များ၏မျက်စိ၏လယ်ကဲ့သို့တူညီသောရဲ့နဲ့ကျွန်မစီးရီးသည်စွဲငြိဖွယ်ရာကြည့်စေချင်ကြောင်းအတွက်ဒါဟာပုံမှန်မှန်ဘီလူးတစ်နည်းနည်းပိုပါပဲ။ ကျွန်မလက်ကိုင်အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်နှင့်ကင်မရာကိုပြပွဲအတွက်ဇာတ်ကောင်ခဲ့လိုခံစားမိစေရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့, ဒါကြောင့်ကြည့်ရှုသူလန်ဒန်၏လမ်းများ၌တည်ရှိ၏။ အဆိုပါ 75mm ကြောင်းလုပ်ဖို့မကြာခဏအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ "
ဂျမေကာတချို့မြင်ကွင်းများရိုက်ကူးသည့်အခါချက်ပြုတ် S7 / i မျက်ကပ်မှန်တကယ် Anderson တို့အဘို့အထွက်၌ရပ်နေ၏။ "ကျနော်တို့ကတောင်ပေါ်မှာမြင်ကွင်းများအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ချက်ပြုတ်မျက်ကပ်မှန်ကယ့်ကိုအထူးသဖြင့်သစ်ရွက်အတွက်ဇာတ်ကောင်နဲ့အတူကြင်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူး။ ကှတျချမှန်ဘီလူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေသောလမ်းကိုသင်ပုံရိပ်ကိုပိုမို Dimensional ပေးခြင်း, သူတို့ကအလွန်အမင်းလက်တွေ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုသည်။ ဒါကပိုကြီးတဲ့ format ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်တစ်ဦးပိုကြီးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ "
သို့သော်ပြန်လန်ဒန်, အန်ဒါဆင်နဲ့တူပါဆုံးအမေရိကန်လူမျိုး, မြူဆိုင်းအုံ့နဲ့ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ခြင်းရာသီဥတုစဉ်းစားလိမ့်မယ်။ သောအမှုမဟုတ်ပါ။ "2018 ၏နွေရာသီမှာတော့လန်ဒန်အတော်လေးပူပြင်းခြင်းနှင့်နေသာကြီးနှင့်ကျွန်တော်တို့အဘို့ပြင်ဆင်ထားကြဘူး။ ကျနော်တို့နေရောင်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖို့တောက်ပတဲ့မီးလုံးထည့်သွင်းရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းရောင်အထုပ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ရတယ်။ ပြင်ပမှအလင်းရောင်သည်အလွန်စိန်ခေါ်မှုသည်အဘယ်မှာရှိကျွန်တော်တို့သည်တိုက်ခန်းနှင့်ထပ်မြင့်အဆောက်အဦးအများကြီးထဲမှာပစ်သတ်။ ငါ၏အနယူးယောက်နောက်ခံနေရာလေးကို လာ. ဘယ်မှာရဲ့ - ။ ငါအိမ်ပြန်တူညီတဲ့လမ်း shoot အဖြစ်သောအခါကြှနျုပျတို့တတျနိုငျသ HMIs နှင့်အတူအများကြီးသုံးပြီး LIFT ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တကယ်ကိုမြင့်မားတဲ့အထိအထဲမှာအနည်းငယ်အလင်းအိမ်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်း "
တစ်ဦး Netflix နဲ့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်နေတာ၏အကျိုးကျေးဇူးများတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးမာစတာ HDR အတွက်ပြီးဆုံးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ "ကျွန်မနှင့်အတူဆော့ကစားရန်လတ္တီတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆဲတောက်ပနေရောင်ခြည်အတွက်ပြင်ပမှာအသေးစိတ်ရယူနေစဉ်ငါမှောင်မိုက်အသားအရေတန်ချိန်အမျိုးမျိုးကိုဖမ်းယူခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာငါအသားအရေတန်ချိန်နှင့်မြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များ၏ကျန်ထိုသို့တွန်းအားပေးနိုင်တယ်လို့ဘယ်လောက်ကြည့်ဖို့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
ခရစ် Harris ကဓာတ်ပုံယဉျကြေး
Panasonic LUMIX S5.9H အတွက် 1K Apple ProRes RAW မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် Atomos မှအခမဲ့ Ninja V update ကိုလွှတ်ပေးခဲ့သည်။ - ဇူလိုင်လ 28, 2020
Sony ၏ Alpha 4S III မှ HDMI မှတဆင့် 60Kp7 ProRes RAW ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် Atomos - ဇူလိုင်လ 28, 2020
Anamorphic / i ကှတျချစက္ခုဗေဒ DP ဂျိုး Anderson က isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော Netflix သုဒ္ဓမျက်ကပ်မှန် S7 / i SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ထိပ်တန်း Boy 2019-09-26
ယခင်: စန်တာမော်နီကာအတွက် FotoKem Expand Footprint
နောက်တစ်ခု: နယူးဟူစတန်ကွန်မြူနတီကောလိပ် Podcasts စတူဒီယို JVC PTZ ကင်မရာများကို, ProHD စတူဒီယို 4000 ထုတ်လုပ်မှုစနစ် Features